Tartanka Dhimashada Iyo 17 Dal Oo Ka Qayb Galaya! - Wargane News
Home Somali News Tartanka Dhimashada Iyo 17 Dal Oo Ka Qayb Galaya!
Tartanka Dhimashada Iyo 17 Dal Oo Ka Qayb Galaya!
Dalka Jordan ayaa lagu qabanayaa tartan aad u layaab badan oo loogu magac daray Tartanka Olombiyaadka Dhimashada, waxaana ka qayb galaya ciidamo si gaar ah u tabbabaran oo ka kala socda 17 Dal oo ay ka mid yihiin Sucuudiga, Sudan, K,Afrika, China iyo Dalal kale.
Tartankan waxa ka mid ah waxyaabaha ay ciidammadaasi ku tartami doonaan Galitaanka dhisme aad u dheer si ay uga soo saaran Sun Kimikal ah iyo tartamo kale sida uu sheegay Ahmed Al-Luuma oo Shabakada Wargane ka soo xigtay.
Afhayeenka oo ka mid ah qaban qaabiyayaasha tartanka ayaa intaasi ku daray in hadafka laga leeyahay tartankani uu yahay kobcinta xidhiidhka iyo wada shaqaynta Dalalka ka qayb galaya iyo ka hor taga iyo ladagaalanka Argagixisada.
Somalia Is Not My Land